21 သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအထင်ကြီးစေရန်၊ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 17, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 12, 2012 Douglas Karr
ငါဒီညစာဖတ်ခြင်းအပေါ်အမီလိုက်အိမ်မှာထိုင်နေခဲ့သည်။ ငါကတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒီတော့ဝေါဟာရအသစ်အဆန်းအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့အခါတိုင်းငါဖတ်နေတာကိုသိချင်ရင်ဝီကီပီးဒီးယားကိုသွားလေ့ရှိတယ်။ ငါလည်းနှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှဒီဟာကဘာလဲဆိုတာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါငါမျက်စိပြန်လှည့်လာတယ်။
ငါမျက်လုံးပြူးရသည့်အကြောင်းရင်းမှာစာရေးသူများ (အထူးသဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရေးဆရာများ) သည်အမြဲတမ်းငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောစကားလုံးများကိုသင်ယူရန်နှင့်သင်ယူရန်အတွက်အသစ်သောတီထွင်မှုများကိုတီထွင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုအမြဲခံစားရလေ့ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကမလုံလောက်မှုကိုဆုတ်ခွာနေစဉ်၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုပိုမိုစမတ်ကျသည်ဟုခံစားရစေသည်။
Paid မီဒီယာ - ကျနော်တို့ဒီကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် ကြော်ငြာ.
ရရှိသောမီဒီယာ - ကျနော်တို့ဒီကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် စကားလုံး - ပါးစပ်.
ပိုင်ဆိုင်မီဒီယာ - ကျနော်တို့ဒီကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး.
အသွားအလာ - ကျနော်တို့ဒီကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် သှေးလှညျ့ခွငျး or ကြည့်ရှုသူ.
gamification - ကျနော်တို့ဒီကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် ဆုလာဘ်, သစ္စာရှိခြင်း, တံဆိပ် or အမှတ်စနစ်များ။ Boy Scout တံဆိပ်သည် ၁၉၃၀ ခန့်တွင်ဖြစ်သည်၊
စေ့စပ်ထားခြင်း - ကျနော်တို့ဒီကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် စာဖတ်ခြင်း, နားထောင်နေသည်ဒါမှမဟုတ် မြင်ကွင်း (နောက်မှ… မှတ်ချက်)
အကြောင်းအရာစျေးကွက် - ကျနော်တို့ဒီကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် စာအရေးအသား.
လှုပ်ရှားမှုသို့ခေါ်ပါ - ဒါကို banner ကြော်ငြာလို့ငါတို့ခေါ်တယ် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နာမည်အသစ်တစ်ခုလိုအပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
အရှိန် - ကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း.
သရုပ်ပြဇယား - (ဥပမာလူမှုရေးဇယား) ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့ဖူးသည် ဆက်ဆံရေး.
အာဏာ - ဒါကိုငါတို့ခေါ်ခဲ့ဖူးတယ် ကျော်ကြားမှု.
ပိုကောင်းအောင် - ကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် တိုးတက်အောင်.
ရူပ - ကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် စည်းရုံးရေး.
ရမှတ် - ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးလေ့ရှိသည် .ရာဝတီ.
analytics - ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးလေ့ရှိသည် အစီရင်ခံစာများ.
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: လူထု - ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးလေ့ရှိသည် segments များ အချက်အလက်ပံ့ပိုးသူများတီထွင်ခဲ့သောအမူအကျင့်သို့မဟုတ်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုအခြေခံသည်။
infographics - ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးလေ့ရှိသည် ဓာတ်ပုံတစ်ခါတစ်ရံ ဒေတာသရုပ်ဖော်ပုံများဒါမှမဟုတ် ပိုစတာ။ အေးခဲနေသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းတွင်ချိတ်ဆွဲထားသည် (er .. workstations) ။
စကားလက်ဆုံ - ငါတို့ကသူတို့ကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် စကားများ.
Whitepaper သူတို့ကိုငါတို့ခေါ်တယ် စာတမ်းများ။ သူတို့ကသာအဖြူလာ၏။
လူသား - ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းမသုံးခဲ့ပါ။ ဖုန်းသို့မဟုတ်တံခါးကိုလူကိုယ်တိုင်ဖြေခဲ့ရသည်။
Added: ဆက်စပ်စျေးကွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြောင်းလဲနေသောသို့မဟုတ်ပစ်မှတ်ထားသောအကြောင်းအရာကိုခေါ်လေ့ရှိသည်။
အခြားထူးခြားသောစကားလုံးများလည်းရှိသေးသည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အလျင်၊ ဒီမိုကရေစီ၊
ဒီလူတွေအနေနဲ့ဂူးဂဲလ် + ကိုနောက်ပြန်လှည့်ဖို့၊ အိပ်ဖို့အနားယူဖို့လိုတယ်၊ ငါတို့တကယ်မှတ်မိနေတဲ့ ၈ တန်းအထိစကားလုံးဝေါဟာရထဲကိုဆင်းဖို့လိုတယ်။ လူသားများအဘယ်ကြောင့်အမြဲပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သနည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုအားဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်းငါတို့တစ်နည်းနည်းနဲ့ပြောင်းလဲင့်ကြောင်းနည်းလမ်း? (ငါမဝယ်ဘူးလားမင်းလား)
ကုမ္ပဏီအများစုဟာရိုးရိုးအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ရုန်းကန်နေရတုန်းပဲ၊ အဘယ်သူ၏အလျင် humanized ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအားဖြင့် amplified စပ်စပ်အရှိန်ရရှိခဲ့သည်မီဒီယာကမ်ပိန်း.
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ငါ့မှာ မီဒီယာအေဂျင်စီအသစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ပိုတစ်ခုပါပဲ အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ... ဒါပေမယ့်ငါအမြဲရှိလိမ့်မည်ဟုလောင်းကစား မီဒီယာအသစ်ဒါပေမယ့် အဝင် တူအချို့မိုက်မဲအသစ်သောအသုံးအနှုန်းဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည် ထက်မြက်သော.
Tags: အရှိန်analyticsအာဏာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှမခေါ်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ဆက်စပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးCurationရရှိတဲ့မီဒီယာစေ့စပ်ထားခြင်းgamificationသရုပ်ပြဇယားလူသားစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographicsပိုကောင်းအောင်ပိုင်မီဒီယာပေးဆောင်မီဒီယာPersonaကဒ်ပြားအသွားအလာစကားအပြောအဆိုWhitepaper
သင်၏အီးမေးလ်ကိုအ ၀ င်စာထဲသို့ရယူခြင်း
သြဂုတ် 18, 2011 မှာ 4: 21 AM
ငါထင်သည်မှလွဲ။ "အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး" ဟုရေးသားခြင်းရောင်း။ သို့မဟုတ် ပို၍ တိတိကျကျပြောရလျှင်“ ရေးသားပြီးသားပစ္စည်းများကိုရောင်းသည်။ ”
၀ န်ခံတာကိုကျွန်တော် ၀ န်ခံတာကိုမုန်းပေမယ့်အနည်းဆုံး ၇ လုံးကို ၁) လုံးဝမစဉ်းစားဘဲ (၂) လုံးလုံးဖြောင့်တဲ့မျက်နှာနဲ့သုံးခဲ့တယ်။
18:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 02
Erik - ငါလည်းသူတို့ကိုသုံးတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်ဝေါဟာရများနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့မပြောင်းလဲသေးဘူးလား။
သြဂုတ် 18, 2011 မှာ 9: 24 AM
ဒီဆောင်းပါးကကျွန်တော့်ကိုပြုံးစေတယ်။ ဒီဝေါဟာရအချို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးပြီးအချို့တော့လုံးဝမသုံးခဲ့ဘူး။ segment နှင့်စျေးကွက်အပိုင်းများသည်အမြဲတမ်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ လုံးလုံးအသုံးပြုခဲ့ဖူးသောဆက်ဆက်ဖြစ်သည်။
18:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 07
အပြုအမူအမျိုးအစားများကိုတီထွင်ခဲ့သည့်အချိန်၌ကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်“ မေးမြန်းခြင်းများ” ပြုလုပ်ပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုထို 'အမျိုးအစားများ' ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက segment ကိုခေါ်တာသတိရလို့မရဘူး။ အဲဒီနောက်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကို“ personas” လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကစာရင်းပြုစုတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
18:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 15
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ငါ Paula ကို update လုပ်ခဲ့တယ်။
18:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 54
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်ဂလပ်၊ ကျွန်ုပ်စာရင်းအသစ်ထဲ၌ကျွန်ုပ်၏ရုန်းရင်းခတ်မှုသည်လူကြိုက်များမှုနေရာတွင်အစားထိုးရန်အာဏာပိုင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံပညာ၏အနက်အဓိပ္ပာယ်အသစ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ 🙂
23:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 48
အလုပ်ရှာဖွေခြင်းကိုအလုပ်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ အလားအလာရှိသောအလုပ်လျှောက်ထားသူကိုရည်ညွှန်းသောအခါ“ အရည်အချင်း” ဟုခေါ်လေ့ရှိသည့်“ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်” ကိုမမြင်ခဲ့ပါ။ ယနေ့လူတိုင်းတွင်“ အမှတ်တံဆိပ်” သို့မဟုတ်“ အဓိကစွမ်းရည်” သို့မဟုတ်“ ထိပ်တန်းအားသာချက်များ” ဖြစ်ခဲ့သော“ အမှတ်တံဆိပ်” ရှိသည်။ အိုး၊ အခြားတစ်ခုမှာယခင်ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဟုခေါ်သည့်“ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရွက်စာတမ်းများ” ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ၎င်းကို“ [အွန်လိုင်း] ပရိုဖိုင်း” အဖြစ်လည်းရည်ညွှန်းသည်။ “ အလုပ်” သည်“ အခွင့်အလမ်း” ဖြစ်ပြီး“ ပြproblemနာ” သည်“ စိန်ခေါ်မှု” ဖြစ်သည်။ “ ၀ န်ထမ်း” သည်“ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်” အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒီတော့ဒါ ... သွားသည်။
24:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 3, 28
ကောင်းပါတယ် တစ်ယောက်ယောက်ကဝေါဟာရထဲက“ သြဇာ” ကိုထုတ်ပစ်တာကိုတွေ့ချင်တယ်။
24:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 40
အိုး သြဇာငါ့အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ 🙂
Lana ရှာဖွေရေး - သုတေသန
24:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 09
ကိစ္စတော်တော်များများမှာရယ်စရာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်စျေးကွက်သမားတွေကသူတို့ဖောက်သည်တွေနဲ့“ အထွေထွေစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအများပြည်သူ” တို့နားလည်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားပြောဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒါဟာခေတ်သစ် sygnal စနစ်လိုပါပဲ။
24:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 41
ငါဒါ Lana မျှော်လင့်ပါတယ်! တစ်ခါတလေကျွန်တော်ဒီဝေါဟာရအချို့ကိုသုံးတယ်၊
1:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 40 မှာ
ငါမနေ့က blogging နဲ့ online marketing ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အေးဂျင့်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ သူမကသူမပြောတာကသူမဘလော့ဂ်ကိုတည်ထောင်တဲ့လူတွေလိုပဲပြောတာ။ ကျွန်ုပ်၏အမှန်တကယ်စိတ်အားထက်သန်မှုသည်မည်သည့်နေရာတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်ကိုသွားပါ။ စျေးကွက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များစွာကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်က၎င်းကိုသတိမပြုမိဘဲဝေါဟာရကိုကောက်ယူလိုက်သည်။
27:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 47
ဒီမှာက "curation" ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေးလုံးပါတဲ့စကားလုံးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါတည့်မတ် stand မတ်တပ်ရပ်
29:2011 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 32
တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာစေရန်လိုအပ်သည့်အရာများစဉ်းစားတွေးခေါ်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါးနှင့်၎င်းသည်မှန်ကန်သည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုလူတိုင်းသိပြီးဖြစ်သည့်အရာနှင့်အသစ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းသည် - ဝေါဟာရပါ ၀ င်ပုံရသည်။ Socialmediatoday မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်နောက်ထပ်ကောင်းသောတစ်ခုမှာ“ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု” ကိုအစားထိုးသော“ Synergy” ဖြစ်သည်။ (http://socialmediatoday.com/node/397449&utm_source=feedburner_twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=autotweets)
သြဂုတ် 25, 2012 မှာ 10: 28 AM
Blhhard အတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး ကကျွန်တော်သုံးပုံတစ်ပုံမှာ 'bifurcation' ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။ မပြောနိူင်ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအုပ်စုနှစ်စုခွဲလိုက်သည်။ လူတွေကမင်းကိုနားမလည်တဲ့အခါမင်းကမင်းကိုပိုပြီးအားသွင်းနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ငါ 'အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ခေါ်ဆိုမှု' 'နှင့်အတူပြissueနာယူလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှရေးသားထားသောစာအုပ်များရှိသည်၊ ၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အခန်းကြီးများရှိသည်။ ၎င်းကို 'နဖူးစည်းစာတမ်းကြော်ငြာ' အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်တူအသုံးပြုသောမည်သူမဆိုတွင်အလေးအနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနောက်ခံမရှိပါ။